Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any UK » Maninona Timeshares no maty
Ireo niharan'ny hosoka Timeshare dia nokendren'ny fikambanana mpanao heloka bevava vaovao indray
Timeshare taloha dia arabe alohan'ny sisa amin'ny indostrian'ny fizahan-tany, "hoy i Andrew Cooper - CEO an'ny European Consumer Claims. “Narary ny olona tonga tany amin'ny hotely izay tsy nitovy tamin'ireo sary mamirapiratra avy amin'ilay brochure. Tonga i Timeshare ary nanolo-tena hiantoka ny fenitra amin'ny klioba manokana. Ho lafo kokoa izany, nefa faly ny olona mandoa.
Herinaratra fanaovana vola tsy azo sakanana indray mandeha, mitarika fizarana fotoana ny orinasa dia ahena tsikelikely ho lasa trano tsy mitongilana
2.Spanoa dia namoaka lalàna fizarana henjana natao hiarovana ny mpanjifa amin'ny varotra avo lenta.
3.Timeshare dia hevitra efa lasa ny fotoana
Nanomboka nivarotra ny Anfi Beach Club tamin'ny 1992, narahin'i Puerto Anfi tamin'ny 1994, Monte Anfi tamin'ny 1997, ary Gran Anfi tamin'ny 1998. Anfi Del Mar, izay misy ny klioba 4 dia nanomboka namaky ny firaketana ny varotra tranokala tsirairay tao amin'ny indostria fizarana fotoana manaraka roapolo taona
Nanangana an'i Anfi ho tetikasany farany i Anja, mpanorina milliardionaire Bjørn Lyng, satria efa nahazo ny hareny tamin'ny indostria. I Anfi dia azo lazaina ho fivoarana be mpizara fotoana avo indrindra eran'izao tontolo izao: nohafarana avy any Karaiba ny fasika mba hamorona morontsiraka fotsy vovoka, nosy miendrika fo 200 metatra no noforonina tao amin'ny helodra voaravaka bozaka sy zavamaniry hafakely Ny fitrandrahana renirano sy riandrano niarahaba ireo vahiny vintana
Miaraka amina ekipa mpivarotra matanjaka 200 sy isan'ny OPC (tout) mitovy amin'ny an'ny nyebarin'i Gran Canaria Anfi dia vola mitentina. Betsaka ny olona nanankarena be
Tamin'ny 5 Janoary 1999 dia niova ny lalàna fa i Anfi, izay notarihin'i Calvin Lucock (sy ny talen'ny varotra / marketing Neil Cunliffe) dia tsy niova.
Nametraka lalàna henjana momba ny fotoana i Espana natao hiarovana ny mpanjifa avo-tsindry varotra. Anfi, miaraka amin'ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny hafa, dia nisafidy ny tsy hiraharaha ireo lalàna vaovao. Azo inoana fa ny tahotra ny vola miditra dia mety mihoatra ny tahotra ny vokatry ny lalàna ary nandritra ny fotoana kelikely dia tsy nisy valiny.
Raha ny tena izy na dia Calvin aza, Neil et al dia mety tsy nahatsapa fa ny masoandro dia efa nanomboka nilentika tamin'ny andron'ny 'Wild West' Anfi. Mety mbola tsy tapitra hatrizay ny fahafinaretana, saingy tamin'ny fotoana nindramina izy ireo.
Tamin'ny 2015, tonga tany amin'ny Fitsarana Tampony Espaniola ny raharaha voalohany tamin'i Anfi. Resy i Anfi ary resy hatrany. Anfi izao dia terena mandoa vola fanonerana ho an'ny tompona fifanarahana tsy ara-dalàna.
Anfi dia manana 48 tapitrisa € amin'ny tranga manohitra azy ireo hatreto. Nampangaina ho nanao heloka bevava izy ireo (saingy tsy nahomby) manafina fananana hisorohana ny fandoavan-trosa.
Nisokatra i Roy Peires Club La Costa tamin'ny 1984 rehefa nividy ny toeram-pialanany voalohany, Las Farolas, tao Costa del Sol. Niitatra haingana ny pairesy tamin'ny 1980 sy 1990. Tamin'ny 2013 dia namerina nanoratra anarana ho CLC World Resorts & Hotels.
Amin'izao fotoana izao dia misy trano fandraisam-bahiny 32 an'ny CLC Manerantany, ao anatin'izany ny fialan-tsasatra fialan-tsasatra, yachts lafo vidy ary lakana lakandrano.
Roy Peires dia mifehy mivantana ny fivoarana sy ny làlan'ny CLC. Peires, avy any Afrika atsimo, feno 70 taonath fitsingerenan'ny andro nahaterahana tamin'ity taona ity ary tsy mampiseho soritra miadana.
Ny CLC World, toa an'i Anfi, dia nisafidy ny tsy hiraharaha ireo lalàna vaovao. Izy ireo koa dia mandoa vidiny mavesatra. Hatramin'izao dia manodidina ny 20 tapitrisa € ny valisoa fanonerana navoaka hamelezana ilay orinasa, ny ampahany betsaka aminy dia azon'ny European Consumer Claims (ECC) ho an'ny mpikambana CLC amidy.
World CLC nanary ny mpiasan'ny varotra tamin'ny Oktobra 2020, tany am-boalohany "hatramin'ny fanamarihana fanampiny". Iray volana taty aoriana dia nanidy ny ekipan'izy ireo tsy voafetra izy ireo ary ny Club la Costa (UK) PLC dia napetraka teo amin'ny fitantanana.
Herinandro vitsivitsy taorian'izay, efatra tamin'ireo orinasa espaniola an'ny CLC no nanjary tsy voavadika; Na dia nilaza tamin'ny tompony aza ny CLC fa tsy ho voakasik'izany ny maha-mpikambana azy ireo dia niteraka ahiahy teo amin'ireo mpikambana CLC sy ireo mpanara-maso ny hoavin'ny klioba
Fomba fananana ara-pialan-tsasatra, Silverpoint dia nivarotra fizarana tao amin'ny Hollywood Mirage Club, Beverly Hills Heights, Beverly Hills Club, Palm Beach Club ary Club Paradiso rehetra ao amin'ny nosy Tenerife.
Resort Properties dia natsangan'ny mpandraharaha britanika Bob Trotta, tamin'ny valo-polo taona, izay niara-nihazakazaka tamin'i Danny Lubert, lehilahy marketing, talohan'ny nialan'izy ireo hamorona First Property Group any Dubai
Mark Cushway dia nizotra nankany amin'ny Properties Resort, avy eo Silverpoint Vacations.
Cushway dia nitondra ny orinasa tamin'ny làlan-kaleha teti-dratsy "fampiasam-bola" ahiahiana (antsoina hoe ELLP) misy fizarana tombony azo avy amin'ny vondrona hotely. Ireo tombom-barotra ireo dia nanjary tamin'ny taona voalohany namporisika ny mpampiasa vola hampihena avo roa heny. Taorian'ny fihodinana faharoa, niditra an-tsokosoko ilay orinasa. Very daholo ny mpampiasa vola.
Silverpoint koa dia tsy niraharaha ny lalàna fizarana Espaniola. An-jatony ny didim-pitsarana nanamelohana azy ireo saingy ny fanamafisana an-keriny nataon'izy ireo dia midika fa mpanjifa amin'ny raharaham-pitsarana maro na dia efa nandresy tany amin'ny fitsarana aza dia tsy nahazo ny tambin-karama.
Silverpoint dia nitady loza ara-bola hatramin'ny fotoana nanombohan'ny fitsarana nanamelohana azy ireo. Angamba ny tetik'asa ELLP dia fividianana vola farany, rehefa fantatr'izy ireo fa mbola eo ambany ny orinasa
Ny toeram-pialan-tsasatra diamondra dia nalaza noho ny vokatra tsara kalitao ary resort mahavariana sasany any Etazonia. Ny fihanak'izy ireo tany Eropa tamin'ny taona 1989 dia nanome trano honenana sy fivarotana faniriana mitovy amin'izany.
Miaraka amin'ny trano fandraisam-bahiny efa ho 50 any Eropa, ny Diamond dia iray amin'ireo lanjan'ny indostrialy, ary izy no laharana faha-8 amin'ny orinasa mpizara fotoana lehibe indrindra manerantany
Ity habe, fahefana ary lazan'ny Diamond Resorts ity dia nanome ny mpividy azy any Eropa ny sasany amin'ny fiarovana matanjaka sy fahatokisana mifandraika amin'ny fananana fialantsasatra.
Tamin'ny volana novambra 2017 anefa, ny mpiasa varotra sy mpiambina rehetra dia nantsoina hivory amin'ny toerana maro manerana an'i Eropa, mitovy daholo. 7 herinandro monja talohan'ny Krismasy dia nasaina ireo mpiasa tao amin'ny toerana eropeanin'i Diamond hanadio ny latabany ary hiomana amin'ny fanidiana ny birao.
Ny varotra latsaka dia anisan'ny olana, fa kosa ny vokatra fizarazarana tsy misy kilema dia nametraka olana amin'ny ho avy miaraka amin'ireo mpanjifa miverina.
Ny fangatahana tambiny noho ny fifanarahana tsy ara-dalàna tao amin'ny toeram-pialantsasatra Espaniola dia nanisy tombo-kase ny fiafaran'ny fivahinianan'i Diamond ho any Eropa
Diamond Europe dia mbola mitazona mpiasa an-trano faran'izay kely ao amin'ny trano fandraisam-bahiny misy fifanarahana franchise, saingy tsy misy toa an'ireo isa tamin'ny andron'ny halcyon tamin'ny 1980 sy 1990.
Hevitra efa lasa ny fotoana
Timeshare dia vaovao sy nampientam-po, tanora vao haingana izay nandrava ireo foto-kevitra momba ny dia efa napetraka, nanelingelina ny maodelin'ny dia mahazatra.
“Mampalahelo fa lasa kamo ilay voalohany. Nijanona ilay maodely ary tsy nahasarika afa-tsy ny sisa amin'ny tontolon'ny dia, fa izy ireo koa overtake overhare izay izy tenany izao no rafitra efa lany daty.
“Maina ny varotra mpikambana vaovao. Ireo mpikambana mpizara fotoana dia misy fatratra ny handositra ny fanoloran-tena. Ny orinasa araka ny fijoroany tsy manana ho avy.